Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Riyadh ee Sacuudiga oo shirkoodii isugu yimid
Jaaliyadda Riyadh ee Sacuudiga oo shirkoodii isugu yimid
Maanta ooy taariikhdu tahay 28/6/ 2013 ayaa waxa shir isugu yimid jaaliyada qiimaha badan ee Sucuudi Carabiya faraceeda Riyaad. Shirkaa oo ay ka soo qaybgaleen dhamaan xubnaha bulshada Soomaalida Ogadenia ee Riyaad. Waxaa shirka lagu furay sidii waajibkuba ahaa aayadaha quraanka kariimka ah oo uu akhriyey sheekh Axmed Yuusuf.
Aayadaha iyo wacdi diini ah ka dib waxaa shirka lagaga hadlayey sidii halganka xaqa ah loogu hurilahaa naf maal iyo maskaxba loona dardar gelin lahaa hawlaha jaaliyada iyo waxqabadka loogana digtoonaan lahaa shirqoolada iyo isku dayga gumaysigu iyo daba-qaniinku ay ka wadaan qurbaha.
Shirku wuxuu bogaadiyey habsami u socodka halganka JWXO ay hurmuudka ka tahayee lagu
xoraynayo Ogadenya. Wuxuu canbaareeyey shirka xasuuqa iyo falalka fulaynimada ah ee gumaysiga iyo gacanyarahiisu ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee Ogadenya. Wuxuu shirka ugu baaqay bulshada Soomalida Ogadenya in ay labanlaabaan waxqabadka ay halganka lagarab taagan yihiin. Wuxuu shirka ku soo dhamaaday farxad iyo go’aano dhaxalgal ah.